आज माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई विरूद्धको मुद्दामा यस्तो सुनुवाइ
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका नेता बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयविरुद्धको मुद्धाको सुनुवाई सुरु भएको हो ।
केहीबेरअघि सर्वोच्च अदालतमा सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलाशमा सुनुवाइ सुरू भएको हो । ललिता निवास प्रकणमा वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा
चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधान मन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो ।
अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो । अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । श्रोत: अनलाइनमार्ग बाट साभार